Emva kwekhefu lokubeleka kunye nekhefu lokubeleka, ikhefu inikwe imvume yokunyamekela umntwana. Ngaphezu koko, iholide enjalo ingasetyenziswanga kuphela ngumama, kodwa kunye noyise womntwana okanye isihlobo esiseduze. Ikhefu elinjalo linokusetyenziswa ngokupheleleyo okanye kwiindawo - kude kube ngumntwana omnye kunye nesiqingatha ubudala okanye iminyaka emithathu ubudala, ngokulandelanayo. Umthetho wezabasebenzi awuboneleli umyalelo othile, ngokuya kwenzeka ukuba uphazamise ikhefu ukuba unakekele umntwana. Umthetho kwakhona awusunguli inkqubo yokushiya ikhefu lokunyamekela umntwana.
Ukuze uphephe ukungqubuzana okungenakulungelelaniswa nabasemagunyeni, kubalulekile ukuba ulungelelanise nabo kwangaphambili ixesha apho uya kushiya ikhefu lokubeletha. Kungcono, ngokuqinisekileyo, kwangaphambili nangobhala ukuze uxwayise abaphathi ukuba ufuna ukuya emsebenzini, ukuphazamisa ikhefu lokubeleka.
Ngokuqhelekileyo umnqweno wokuphazamisa ikhefu lokubeleka livela kwintombi, oku kuyindlela yakhe. Ukuya emsebenzini, ibhinqa kufuneka ibhale inkcazo apho ebonisa ukuba ufuna ukuphelisa ikhefu lokubeleka aze abuyele kwimisebenzi yakhe yomsebenzi. Abasemagunyeni bavakalisa imvume yabo ngale ndlela elandelayo: i-visa ibhaliwe kwingxelo yomfazi, ebonisa ukuba le ntokazi inokuya emsebenzini. Abasebenzi, ngokubhekiselele kwingxelo, benza umyalelo ofanelekileyo kwiinguqu ezifunekayo.
Kodwa kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ukuba ibhinqa lingathathi ngokupheleleyo ikhefu lokubeletha, unelungelo lokuya eholide kwakhona (de kube umntwana wakhe ejika 3) ukuba akhulise umntwana. Ukuba umfazi oya emsebenzini unomfuneko wokusebenzisa ixesha eliphumayo lokuphumla kwekhefu, unikeza umqeshi isitatimenti esibhaliweyo esibonisa umnqweno wakhe. Kule meko, umfazi kufuneka ukuba agcine ingxelo eqinisekisiwe ngumqeshi. Isitatimende esilondoloziweyo siqinisekiso sokuba umfazi kwikhefu lokunyamekela umntwana ongeyena iminyaka emithathu ubudala akayi kukhishwa ngenxa yecala lolwaphulo-mthetho, ngamanye amagama, ngokungabikho emsebenzini. Ngoko ke, xa ubhekene nesimo esifanayo, kufuneka ubhale ngokucophelela ukubhala phantsi nawuphi na amalungiselelo nomqeshi. Kuyinto enqwenelekayo ukuba kukho ikopi yecatshulwa esandleni, nokuba sisicelo okanye umyalelo apho ifakwe i-visa. Emva koko, isivumelwano somlomo asikho mthethweni. Ilungiselelo elinjalo liya kuba lide nje umqeshi efuna, kodwa ngokukhawuleza ukuba kube nzima ukuba anamathele kwilungiselelo elinjalo, uya kukulibala.
Njengomthetho, ngelixa umqeshwa ekhathalela umntwana ngelixa ekhefu, omnye umsebenzi uqeshe kwindawo yakhe, kunye nekhontrakthi yengqesho. Ngokuqhelekileyo kwisivumelwano esinjalo sengqesho okanye umyalelo wokungena kwisithuba esithile kukho icandelwana apho kuthiwa umqeshwa ubanjwe emsebenzini ngomzuzwana.
Ubudlelwane bezobasebenzi kunye nomqeshwa omtsha phelisa emva kokuba umqeshwa ushiye ikhefu. Kubalulekile ukuphawula ukuba kwimiba ethile, umgaqo jikelele ukuba umqeshwa kufuneka anikezelwe ngokubhaliweyo malunga nokuphelelwa kwintrakthi yengqesho ezintathu iintsuku ngaphambi kokupheliswa akusebenzi. Ukupheliswa kwesivumelwano somsebenzi kuboniswa ngumyalelo okanye umyalelo womqeshi, emva koko okungeniswayo okuhambelanayo kwenziwe kwincwadi yomsebenzi womsebenzi.
Ngokuqhelekileyo umhla wokugqibela womsebenzi osebenza phantsi kwesivumelwano somsebenzi kunye nomhla wokuphuma emsebenzini owawuhlala eholidini. Ngokuqhelekileyo, oku kufuneka kuboniswe kwiphepha lexesha, apho umqeshwa usebenza khona.
Khumbula ukuba ukuze uphephe ukuxhatshazwa kweemeko kunye nabasemagunyeni, kufuneka uhlale ubeka ngokucacileyo indlela yokusebenza yakho. Kubalulekile ukulungelelanisa nabasemagunyeni ixesha oza kusebenza xa ugqiba umsebenzi. Khumbula, zonke ezi zigugu kufuneka zibhalwe kumqulu ochaphazelekayo (le nto ingaba isivumelwano esahlukileyo, isiqhotyoshelweyo kwisivumelwano somsebenzi, umyalelo okhethekileyo), kwaye isayinwe ngabaphathi. Ukuba amaxwebhu anjalo akhange akhutshwe kwinkampani yakho, ngoko kwisicelo sakho umphathi kufuneka akhuphe i-visa aze asayine "andiyikhumbuli".
Unokukhuselwa njani ngokuziphatha okuphazamisayo?
Izilwanyana kwi-trimester yokuqala yokukhulelwa
Indlela yokuwa kunye noYe: 4 imithetho eya kusebenza nawuphi na umzekelo
Inkukhu kunye noshizi
Iipropati eziwusizo ze-bran
Isaladi yaseThailand nge daikon
IPasta kunye noshizi
Oko kufuneka uyenze ukuze ube ngumhle kwaye ulungele kakuhle
Ukuncelisa nokunyangwa kwezifo